चट्याङले बैतडीमा फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध - Technology Khabar
चट्याङले बैतडीमा फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध
टेक्नोलोजी खबर २७ माघ २०७५, आईतवार १५:२०
बैतडी । चट्याङले जिल्लामा फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । बुधबार हावाहुरीसँगै परेको वर्षा, असिना र हिमपातले यहाँको फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गराएको थियो ।
फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा यहाँका नागरीक सञ्चार सुविधाबाट वच्चित भएका छन् । नमस्ते फोनको नेटवर्क कुनै कुनै बेला आए पनि राम्रोसँग काम नगर्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ थियो । यस्तै सिगास गाउँपालिका–९ चौखामलगायत टोलमा एक हप्तादेखि नमस्ते फोनको नेटवर्क नभएको त्यहाँका बासिन्दाले बताए ।
यस्तै मेलौली नगरपालिकामा पनि नमस्ते फोनको नेटर्वक नभएको भीमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
दशरथचन्द नगरपालिकाको कटपतेमा रहेको टेलिकमको टावरमा चट्याङ परेकाले फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकम बैतडी शाखाका प्रमुख सुरत खड्काले बताए । अवरुद्ध फोन र इन्टरनेट सेवा आज अपरान्हसम्म सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
सिगास मेलौली लगायत ठाउँमा भने हिमपातका कारण फोनसेवा अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।
२७ माघ २०७५, आईतवार १५:२०
Previous: कसले दियो अमेजनका सीईओलाई धम्की ? जेफ बेजोसले गरे खुलासा
Next: रोबोटहरु बिचको फाइट हेर्ने हो ? त्यसोभए यन्त्र ७.० हेर्न जानुस्
५ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:४४
पाकिस्तानमा ४ करोड ४० लाख आईएमईआई दर्ता, डिभाइसको पहिचान र ब्लक गर्ने सिस्टम जडान
४ भाद्र २०७६, बुधबार ११:०४
शुरुभयो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको काम, कम्पनीले सरोकारबालाहरुसँग छलफल गर्दै
२ भाद्र २०७६, सोमबार १८:११